किमको मृ त्युको खबरको वास्तविकता बल्ल बाहिरियो ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /International/किमको मृ त्युको खबरको वास्तविकता बल्ल बाहिरियो !
चीनका सञ्चारमाध्यमहरुमा पनि किमलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजीका समाचार आइरहेका छन्। चीनले चिकित्सकको एक टोली उत्तर कोरिया पठाएको समेत बताइएको छ। चीनको मेडिकल टिमका एक सदस्यले जापानको म्यागेजिनलाई बताए अनुसार, किमको केही महिनादेखि मुटुको समस्या देखिएको थियो। केही दिनअघि उनी रिङ्गटा (चक्कर) लागेर ढलेका थिए। त्यसपछि उनलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।
उनको एक सर्जरी भइसकेको बताइएको छ। अब उनको मुटुमा स्टेन्ट लगाउनुपर्ने हुनसक्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले समेत किम बिरामी भएको खबर गलत रहेको बताएका थिए। किमको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ यसबारे यकिन जानकारी भने आइसकेको छैन। उत्तरकोरियामा महिला शासक आउन सक्ने विभिन्न सञ्चारमाध्यमले अड्कलबाजी गरिरहेका छन्।